AVG antivirus ကိုဘယ်လိုတင်ရမလဲ လိုင်စင်နဲ့သုံးလို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ - MYSTERY ZILLION
AVG antivirus ကိုဘယ်လိုတင်ရမလဲ လိုင်စင်နဲ့သုံးလို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ကျွန်တော်က ဝင်းဒိုး..7...64bit ကိုသုံးပါတယ် avg ကိုလိုင်စင်နဲ့သုံးလို့၇တယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါင်းလော့ဆွဲလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့လိုင်စင်ကသေနေတယ်လေ trial version လဲမဟုတ်ဘူးလေလိုင်စင်နဲ့သုံးလို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိချင်လို့ပါ ကူညီပေးပါနော်..တစ်နှစ်စာသုံးလို့ရအောင်ပေါ့လေ..ကူညီပေးကြပါနော်အစ်ကို၊အစ်မတို့ရယ်နော်
please use unicode or english. We are not allow to use zawgyi.
Coz i use both in my window.
i mean what they look different Unicode and Zaw-gyi.
i want to avg key for full version but i used now avg internet security so i want to antiverus avg full version but how can take to do please help me i have no idea so try to do it ? please help me .....brother and sister please.......................
AVG Internet Security 2012 v12.0.1872 key
AVG Anti-Virus Pro 2012 v12.0.1872 key
AVG Internet Security Business Edition 2012 v12.0.1872 key
အဆင်ပြေပါစေဗျာ. . .
thank for you .......
i want to how can download in these
just now i have no ok
Avg internet security 2013 Key..
ဒီဆိုဒ်မှာ၀င်ပြီးဒေါင်းလိုက်ပါ။AVG 2013 antivirus & internet security +key ပါတပေါင်းတည်း ရမယ်။
ဆိုဒ်ကတော့ http://phothaaung.blogspot.com မျာ၀င်ပြီး Antivirus label ကိုကလစ်လိုက်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ် အဆင်ပြေပါစေ
ကျွန်တော်လည်း windows764bits သုံးဖူးပါတရ် avg internet security လဲအဲ့window မှာတင်ဖူးပါတရ် ပြသနာမရှိအောင်လုပ်နည်းကတော့ အင်တာနက်နဲ့တခါတည်း install လုပ်နည်းပါဘဲ အင်စတော လုပ်တဲ့အစပိုင်းမှာ license key ထည့်ရမည့်နေရာကို ကို့မှာရှိတဲ့ key နဲ့တခါတည်းထည့်ပေးလိုက်ရုံပါဘဲ အဲ့တာဆိုရင် ကို့ window နဲ့ကိုက်တဲ့ ဖိုင်ကိုသူ download ပေးပါလိမ့်မရ် 64bit 32bit ဂရုစိုက်စရာမလိုပါဘူး ပြီးသွားရင် update file ကို နောက်ထပ် ကလစ် ပေးလိုက်ရုံပါဘဲ wifi နဲ့ဆိုပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မရ် program file က 32MB နဲ့ update file 85 MB တောင်ရှိလို့လေ ၂၀၁၈ ထိအသုံး၀င်တဲ့ ကီးတွေရှိပါတရ် ကျွန်တော်မတင်ပေးတော့ပါဘူး avg key ကရှာရလွရ်တရ်လေ အဆင်ပြေပါစေ